Maalinta caalamiga ah ee cudurka Cagaarshowga (World hepatits Day) oo Muqdisho laga xusay | gobolada.com
Munaasabad lagu xusayey Maalinta caalamiga ah ee ka hortaga iyo la dagaalanka cudurka dilaaga ah ee Cagaarshowga (World hepatits Day) oo sanad kasta la xuso 28-ka July ayaa shalay gelinkii dambe lagu qabtay xarunta kuliyadda Sayniska iyo teknolojiyada Jaamacadda Ummadda ee magaaladda Muqdisho.
Waxaa soo qaban-qaabiyey Munaasabadaas Ururka ardayda dhaqaatiirta Soomaaliyeed (SOMSA), iyadoo halku dhega sanadkan ee uu yahay Ciribtirka Cudurka Cagaarshowga (Eliminate Hepatitis).
Waxaa ka qeyb galay xuskan oo si si weyn loo soo agaasimay, masuuliyiin ka Kala socotay Wasaarada Caafimaadka, heyadda caafimaadka adduunka WHO Aqoonyahano, boqolaal ka tirsan ardayda Jaamacadaha qaarkood, masuuliyiin kala duwan iyo xubno ka socday qeybaha bulshada.
Guddoomiyaha ururka Ururka dhaqaatiirta ardayda Soomaaliyeed Dr. C/llaahi Maxamuud Tuuryare oo furitaankii munaasabadaas ka hadlay ayaa u mahad celiyey Prof. Dufle, ardayda ka faa’iideysatay casharkan iyo martida kala soo qeyb gashay intaba, wuxuuna xusay in ururka SOMSA uu mar walba qabto tababaro si kor loogu qaado aqoonta ardayda Soomaaliyeed ee ku howlan barashada Caafimaadka.
Ugu dambeyn masuuliyiinta goob jooga ka aheyd xuskan ayaa shahaadooyin uu bixiyey ururka SOMSA waxay guddoonsiiyeen ardayda ka faa’ideysatay dhegeysiga casharka ku saabsanaa Cagaarshowga waxayna munaasabadaas ku dhamaatay Sidii loogu talo galay.